GOBOLKA KEMEROVO AYAA DIYAARIN DOONA FERMISKA - MAQAALLO
Gobolka Kemerovo ayaa diyaarin doona fermiska
Bilowga Maajo ee sanadkaan, dadka soo iibsada gobolka Kemerovo waxay bilaabi doonaan inay ururiyaan caleemaha geedka fijishada. Iyada oo ku xiran cimilada, ururinta dhirta duurka waxay socon doontaa 5 ilaa 20 maalmood.
Caarada ee ka baxsan ee fardaha Kuzbass leedahay qiimaha nafaqo weyn. Mid ka mid ah hantidiisa faa'iido leh waa ka saarista radionuclides jirka bini'aadamka. Fern la shiilay, ku darey ugxan-daro iyo saladh.
Fadlan gaar ah ee suxuunta ka soo qoyan Kuzbass, tashtagoly iyo martida gobolka. Intii lagu jiray bandhiga "METRO-EXPO - 2019" guddoomiyaha Vnesheconombank Igor Shuvalov ayaa ahaa mid aad u qadarinayay buur-Shor fern.
Shuvalov wuxuu dhajiyay dhadhankiisa wanaagsan iyo sifooyinka wanaagsan, waxana sidoo kale loogu yeeray cuntooyinka ugu habboon muddada Lent. Buuggan yar ee Kuzbass Orlyak ayaa lagu soo bandhigay badeecad ahaan wax soo saarka cuntada ee mashruuca "Khariidadda Gastronomic ee Ruushka".
Qaybta gobolka ee beeraha iyo warshadaha wax soo saarka ayaa muujinaya in goynta dusha sare ee geedka bacalka gobolka Kemerovo uu bilaabmaa maalmaha koowaad ee bisha Maajo waxayna ka dhacaan 12 degmo. 12 bulshada macaamiisha iyo 2 ganacsade oo gaar loo leeyahay ayaa ku hawlan hirgelinta warshadda.